Ciidamada DFS iyo kuwa AMISOM oo dhaq dhaqaaqyo Ciidan ka wada Magaalada Ceelbuur – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada DFS iyo kuwa AMISOM oo dhaq dhaqaaqyo Ciidan ka wada Magaalada Ceelbuur
MAREEG 17 December 2015 17 December 2015
Ceelbuur (Mareeg.com)—Isagoo wareysi gaar ah siinayay radio Muqdisho, Nuur Xasan Guutaale, Guddoomiyaha Degmada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud ayaa waxuu faah faahin ka bixiyay dhaq dhaqaaqyo milatari oo si wada jir ah uga wadaan Ciidamada Dowladda iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM Nawaaxiga Degmada Ceelbuur.
Guddoomiyaha Degmada Ceelbuur, Nuur Xasan Guutaale ayaa carabka ku adkeeyay in dhaq dhaqaaqyadaasi ay uga goolleeyihiin sidii Al Shabaab looga saari la haa Deegaanadad ay kaga sugan yihiin Degmada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud.
Mr. Nuur Xasan Guutaale ayaa xusay in sidoo kale Al Shabaab jareen qaar ka mid ah Wadooyinka soo gala Magaalada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya.
Sikastaba, Ciidamada Dowladda Soomaaliya, oo kaashanaya kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ay dhaq dhaqaaqyo Ciidan oo lagu baacsanayo Al Shabaab ka wadeen qeybo ka mid ah Deegaano hoostaga Magaalada Ceelbuur ee Gobolka Galgadauud.
DEG DEG:- Taliyahii Ciidanka Birmadka Berbera oo Gordhawayd La dilay